Madaxweynaha Soomaaliya oo maanta dalka dib ugu soo laabtay – SBC
Madaxweynaha Soomaaliya oo maanta dalka dib ugu soo laabtay
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh maxamuud iyo wafdi uu horkacayo ayaa maanta lagu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Magaalada Caasimada ah ee Muqdisho.
Madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa waxa ay ka soo laabteen safar ay kaga soo qeyb galeen kulan ay isugu imanayeen Wadamada barwaaqa sooranka looyaqana ee G8ka kaas oo ka dhacay magaalada London Cariga dalkaasi Ingiriiska.
Waxaa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho Madaxda golayaasha Wasiirada iyo Baarlamanka Soomaaliya oo iyagu dalka ku sugnaa.
Saxaafada waxaa la hadlay soo dhaweyn ka dib afhayeenka Madaxweynaha Soomaaliya Mr C/raxmaan Yariisoow isagoona faah faahin ka bixiyay natiijooyinka kulamadii kala duwanaa ee ay wafdigiisa madaxweynuhu kula soo qaateen London madax iyo xubno caalami ah.
Waxa uu sheegay Afhayeen Yariisoow in Madaxweynuha uu ka qeyb galay xaflad heersare aheyd oo ay qabatay boqorada dalkaasi Inigiriiska kaas oo ay ku wada kulmeen madax sar sare iyo diblumaasiyiin iyagoo ka wada hadlay arimaha ugu muhiimsan ee ay soomaaliya .